XUSIDDA MAALMAHA GOBANIMADA EE AFRIKA OO AAN QIIMA KU FADHIYIN
mahamud samatar samatarapt@yahoo.com
Wadamada Afrika xornimaddii gumaytayaashii saancaddaalah ay ka heshay , waxa badalay kaligood talyeyaal saanmadow oo qaranimaddii iyo calankii u noqdeen wax ama shaygaqudha ee ay ku halqabsadaan ama u soo maraan marka ay laynayaan ama cabudhinayaan dhaqdhaqaaq ka soo horjeeda taladooda xun.
Ummaddo badan oo Afrikaan ihi waxa ay ka doorbidi lahaayeen maanta nolosha ay ku noolyihiin tii ay ku noolaayeen markii uu saancaddaaluhu haystay , marka la barbar dhigo ta uu baday saanmaddoobuhu maanta. Markii uu saancadaaluhu haystay Afrika dadku way u sinaayeen, oo intabadan umuu kala eegayn qabiilka uu qofku ka soo jeedo , marka uu shaqo siinayo qofkaas , waxa qudha ee uu qiimaynjiray, kartida , waayo argnimada iyo waxbarashada uu qofkaasi leeyahay.
Tusaale markii uu fransiisku haystay Jabbuuti , qawmiyadaha ku nool Jabbuuti ama dhalashada Jabbuuti haystay way u siinaayeen , oo dadku sida ay kala karti iyo waxabarasho badan yihiin ay shaqada u heli jireen , inkasta oo uu saancadaaluhu u xumaa ama si xun ula dhaqmi jiray inta aan u dhalan Jabbuuti, ama intii ka soo horjeeday joogitaankiisa.
Markii uu ay Jabbuuti heshay xornimaddii ama gobanimo ku sheegii , waxa taladii gacanta ku dhigay koox ka soo jeeda beel qudha, kooxdaas uu noqtay intii ka faa iday calankii iyo xornimaddii. Ummadihii aan ka soo jeedin kooxdaas waxa ay u kala yaaceen addunka , oo badankoodii waxa ay magangalyo ka heleen Kanada iyo wadamada ku hadla af fransiika ee Yurub.
Saanmadoobayaashii haystay Siraa lioon waxa ay badeen ummaddoodii in uu Ingriiskii gumaysanjiray u gurmada.Saanmadoobayaashii haystay Ifari Kost , wax ay badeen dadkoodii in uu Fransiiskii gumasan jiray bad baadiyo. Saanmadoobayaashii haystay Laybeeriya waxa ay badeen ummaddoodii in ay barido in uu badbaadsho Saancaddaalhii addonsan jiray ee Maraykan.
26kii juun , 1dii juulaay iyo 27kii juun waa kuwii noqday calan, xornimo iyo magac u dabran kooxdii kala wareegtay talada saancadalaayahii. Waxa iswaydiin mudan imisa jaamacdoo iyo dhakhtar ayaa ku ooli lahaa Somaliland, Somalia iyo Jabbuuti , haddii ay saancadalaayaashii sii joogi lahayeen 5 sanadoo.
Maandeeq curashadeese maxay u kordhisay ummadihii Somaaliyeed ee ka soo jeeday beelihii la hayb sooci jiray maxayse ka dhintay.Runtii Maandeeq curashadeedii wax bay u dhintay oo Ingriiskii, Talyaangii iyo Faransiikii may waydii jirin qoladooda.
Haddii se aynu u dabaal dagayno Maandeeq maalintii aan kala guurnay saancadalayaashii haystay ama ay u seetaysnayd Maandeeq , maxaynu ugu dabaaldagi waynay maalintii aan ka jarnay dabarkii uu ku xidhay saanmadoobihii dhiigga ka jaqayay, Marka runta laga hadlayo ee aan qiiqa la isku qarinayan , beena aan nafta loo sheegayn waxa xusid iyo dabaaldag mudan maalintii aan Maandeeq ka jarnay dabarkii ay oogu xidhnayd saanmadoobihii Siyaad. Sababta oo ah Siyaad qori caaradii ayuu ku tagay kadib markii ay kumanaan dhinteen, halka ay Ingriiskii, Talyaanigii iyo fransiiskii ay gacanqaad , xaflad iyo xil wareejin ay xilkii ku wareejiyeen askartii shalay uu mushaharka siinayay, sida askarigii Siyaad iyo kuwo kale.Calankii lagu kala badashay xamar, ee ay kala badasheen Talyaangii iyo Askaartiisii, runtii waxa ay ahayd shaadh la iska badalay oo kale, oo Talyaanigu koox uu kalsoon yahay uun buu meesha dhigtay.Waxa aynu ognahay in uu Talyaanigu ahaa yahaynawadanka qudha ee reer galbeed ee ugu dhaw Somalia , marka ay noqoto diblmaasinimo iyo taageeroba,imika waxa caado noqotay in lagu faano in uu Talyaanigu yahay wadanka qudha ee daneeya danaha Somalia marka laga had layo shirka ka socda KEENYA, oo raga reer SOMALIA ee meesha ku shira yaa way u soo kala badiyaan, ninka u qaabilsan Talyaaniga arimaha Somalia . Markaa waa maxay dabaal daga 1da luulyo.Haddii maanta ummadda Somalia la yidhaa dawladda Talyaaniga ayaa saanmaddoobaha idinka ridi oo wadanka qabasan 100% gacma furan ayay ku soo dhawanayaan.
Farnsiisku Jabbuuti wuxu si sharaf leh xilkii ugu wareejiyay kooxda imika u talisa , oo uu waliba ku yidhi ciidamo ayaan idiinka tagayaa idinka ilaaliya Somalia iyo Ethiopia madaama aydaan isdifaaci karayn, dawladahana idinka xoog wayn yihiin.
Sida ayniga ila tahay 100% ummadaha Afrika ku nooli , inta aan ahayn Sawd Afrika, Mozaambiik iyo Zimbaabwe waxa ay door bidi lahaayeen saancadaalihii, marka aad eegto maanta saanmadoobaha haysta.
Inta ay maandeeq u dabaran tahay saanmadoobaha uga daray seetadii saancadalaha waxba yaan loo dabaal dagin.